Indlu encane yama-gnomes, ama-elves noma ama-fairies | Imisebenzi yezandla ivuliwe
DonluMusical | | Umhlobiso, Imisebenzi yezandla yezingane
Izindlu zama-gnomes, ama-fairies noma ama-elves bekulokhu kuyizintandokazi zami ezindabeni zezingane nasezinganekwaneni. Banomlingo kuwo wonke amakhona futhi abafana namantombazane bacabange ukuthi bazohlala kuwo. Kulokhu okuthunyelwe ngizokufundisa ukuthi ungayenza kanjani le ndlu encane amakhadibhodi amaphepha asendlini yangasese Ongayisebenzisa njengebhokisi likaswidi, ukugcina izinto noma umhlobiso nje.
1 Izinto zokwakha indlu eyi-gnome
2 Inqubo yokwakhiwa kwendlu eyi-gnome
Izinto zokwakha indlu eyi-gnome
Imiqulu yephepha langasese
Imbali ye-EVA nembuthano yembobo
Isikele esenziwe umbala obomvana
Inqubo yokwakhiwa kwendlu eyi-gnome
Linganisa ubude bekhadibhodi kanye nerula bese usike umucu ohlanganisa lonke ucezu.
Bese ubeka induku yeglue bese hlanganisa umucu wephepha ngokucophelela ukuze iqonde.
Ngosizo lwe-cd dweba isiyingi eshidini elibomvu bese usika.
Sika ikota yombuthano obomvu ukwazi ukwakha uphahla lwendlu.
Namathisela ukuphela komunye komunye njengoba ubona esithombeni futhi yilokho kuphela sizoba nophahla yendlu yethu encane, fanisa kahle imiphetho.
Ngesibhakela somgodi imibuthano emhlophe Ngizokwenzela imibuthano ethile ukuhlobisa uphahla futhi lubukeke njengekhowe.
Thatha i-cd futhi futhi usike isiyingi ngenjoloba ye-eva eluhlaza Ngosizo lwesikele se-pinking ukuze imiphetho ibe kumaza, kepha uma ungenayo, akukho okwenzekayo, ungakwenza ngesikele esijwayelekile.
Nge-punch hole yembali yenza okumbalwa futhi uzinamathisele esiyingini esiluhlaza okotshani, isatshalaliswe kahle.
Ungayenza i- khomba ngomaka obomvu phakathi nendawo ukubenza babe bahle ngokwengeziwe.
Ukwakha iwindi, sika imichilo emincane yenjoloba ye-eva emnyama bese uyinamathisela njengoba ubona esithombeni, bese usika okusele futhi sizobe sesilungile iwindi.
Sika unxande enjoloba ye-eva ezoba Isicabha, ungenza imininingwane ngomaka onsundu.
Uma sesinomnyango nefasitela, Sizonamathela emzimbeni wendlu.
Sesiqedile, besizohlala kuphela hlanganisa uphahla ngaphezulu kwesonto futhi ngomumo !! Ngincoma ukuthi unganamathiseli ingxenye engezansi yendlu engxenyeni eluhlaza ngoba ngaleyo ndlela ungayiphakamisa bese ugcina izinto ezincane ngaphakathi njengama-trinkets, izindandatho, izinto zokwakha noma yini oyifunayo.
Futhi kuze kube manje umbono wanamuhla, ngethemba ukuthi uwuthandile, uma wenza, ungakhohlwa ukungithumela isithombe nganoma yimaphi amanethiwekhi wami wokuxhumana nomphakathi.
Sizobonana kubuciko obulandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Umhlobiso » Indlu encane yama-gnomes, imikhovu noma ama-fairies
Iphosta "BOO" ye-Halloween
Izicathulo zezingane ze-Baby Shower